Downloads 46 934
Mpanoratra: Massimo Taccoli, Dennis Seeley, dave Eckert, Michel Gerard, FSX ny fiovan'ny teny Bluebear
Nohavaozina taminy 18 / 03 / 2018: Ankehitriny 100% mifanaraka amin'ny Prepar3D v4, teratany FSX modely, teboka vaovao, famaritana vaovao amin'ny anaran'ny Aircraft.cfg, bugfixes kely.
Nohavaozina taminy 01 / 10 / 2012: Amin'ity dikan-teny vaovao ity dia natsangana ny modely 3D amin'ny FSDS 3.51 ary natambatra tamin'ny Makemdl FSX Ary ankehitriny, misy rakitra feno sary mihetsika amin'ny antsipiriany, fiaramanidina virtoaly miaraka amin'ny kofehy mavitrika, ny pedals, ary ny loha solaitra, ny varavarana miaraka amin'ny tohatra, ny kitapo fandroana amin'ny setroka. Manazava ny Cockpit Virtual.
Ho an'ny version azo ampiasaina amin'ny FS2004 kitiho eto
Bombardier Canadair CL-215 amin'ny tontolon'ny 12 misolo tena ny tsirairay avy amin'ireto mpandraharaha ireto: Fiarovana Frantsay F-ZBBV amin'ny endrika roa, Gresy, Royal Thai Navy, Italia SOREM, Espaina CEGISA, Newfoundland sy Labrador, Conifair-Quebec, Buffalo Airways, Espana Air Force 431-03 SAR, Espana Air Force 432-14, Faritanin 'i Manitoba - 250 sy lahatsoratra hafa dia hita ao amin'ny Internet. Ampidirina amin'ny tabilao virtoaly, 2d panonona, feo sy famakiam-peo manokana, references, lisitra fanamarinana. ary lisitry ny fanalahidy, fanodinana rano fisotro.
IZANY no tena ilaina mba hahatsiaro ny fanitsiana ny entona entona feno mba hitazonana izany eo ambanin'ny MTOW ho an'ny tany na rano fisotro. Ireo dia omena etsy ambany na ao amin'ny fizarana Performance amin'ny file Aircraft.cfg. Ny tsy fanitsiana ireo soatoavina ireo dia mety ho sarotra ny miala amin'ny làlan-kilometatra miaraka amin'ny be loatra ary tsy azo atao mihitsy ny miala na mihetsika raha mivezivezy ao anaty rano.
Ampiasao ny tontolon'ny 2d "TONTOLO MALAGASY" (D) mba hitantanana ny asa fanodinana rano.
MTOW: land 43,500 lbs, rano 37,700 lb.
MLW: 34,400 lbs, tany na rano.
Fanapahana fahefana: 2,100 HP.
Mahefa foana: 1,900 HP.
Max Speed ​​Speed: 160 KTAS amin'ny 10,000 ft.
Fandrosoana haingana be: 145 KTAS amin'ny 10,000 ft.
Mihazakazaka haingana ao amin'ny MTOW: 75 KIAS miaraka amin'ny 15 deg.
Feno haingana ny 34,400 lb: 63 KIAS miaraka amin'ny 25 deg.
Fihodinana voalohany: 1,000 fpm.
Fandefasana fiarandalamby: 1,520 mi amin'ny lozam-pifamoivoizan'ny 1,100 lb.
Vondron'ny rano: 1,410 gal US.
Fiatombanana entona: 1266 imp-gal amin'ny 16 mitovy biriky karazana solika.
Ny tahirin-kevitra ara-teknika sy ny fahombiazana dia azo avy amin'ny angona ofisialy
Ny Canadair CL-215 no fiaramanidina voalohany natao ho mpandoka rano amin'ny afo. Izy io no fiaramanidina malaza indrindra manerantany, ka hatramin'ny hoe any Frantsa, dia lasa midika hoe fiaramanidina mitam-basy i Canadair. Ny CL-215 dia natsangana avy any Canadair (Bombardier Aerospace amin'izao fotoana izao) ary namorona ny 125 kopia 1966 sy 1989, entana any amin'ny firenena folo. (source Wikipedia)
Bombardier CRJ-200 feno fonosana FSX & P3D 1.1